အစ္စရေးနိုင်ငံတွင် တောရိုင်းကြိုးကြာများစွာအကြား ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ တွေ့ရှိ - Xinhua News Agency
အစ္စရေးနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ Hula တောင်ကြားတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် မီးခိုးရောင်ကြိုးကြာစုတစ်စုကို မြင်တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဂျေရုဆလင်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အစ္စရေးနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းရှိ Hula တောင်ကြားတွင် H5N1 ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ကူးစက်ခံထားရသည့် တောရိုင်းကြိုးကြာကောင်ရေ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း အစ္စရေး စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဧရိယာအတွင်း ပုံမှန်မဟုတ်သော ကြိုးကြာငှက်သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်းနမူနာစစ်ဆေးမှုများတွင် သေစေနိုင်သော H5N1 ပိုးကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းသို့တွေ့ရှိပြီးနောက် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုများအား ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရောဂါကူးစက်ခံထားရသောငှက်များနှင့် နီးနီးကပ်ကပ်နေခဲ့သူများအား ကုသမှု ပေးခဲ့သသည်။
ယခုနှစ်တွင် ငှက်ထောင်ပေါင်းများစွာသည် အစ္စရေးနိုင်ငံကိုဖြတ်၍ အာဖရိကသို့သွားရာလမ်းတစ်လျှောက်တွင် ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကို တိုးမြင့်စေကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးဌာနက တောင်သူတွေကို မွေးမြူရေးခြံနှင့် တောငှက်တွေကြား ကူးစက်မှု မဖြစ်စေရန် ခွဲခြားထားဖို့ ပြောကြားထားကြောင်း သိရသည်။
မကြာသေးမီက အစ္စရေးမြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းရှိ ကြက်လှောင်အိမ်များတွင် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အစ္စရေးတွင် ပထမဆုံးနှင့် အကြီးဆုံး ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အစ္စရေးနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းရှိ မွေးမြူရေးကြက်ဆင်စခန်း ၉ ခုတွင် ကူးစက်ခံခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။
H5N1 ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးသည် ဝက်၊ ကြောင်နှင့် ကျားကဲ့သို့သော အခြားတိရစ္ဆာန်များတွင် ရောဂါကူးစက်နိုင်ကြောင်းနှင့် လူများတွင် ကူးစက်မှုမှာ ရှားပါးကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Israel detects bird flu among dozens of wild cranes
JERUSALEM, Dec. 16 (Xinhua) — Dozens of wild cranes infected with the H5N1 bird flu have been detected in the Hula Valley in northeastern Israel, Israel’s Ministry of Agriculture and Rural Development said on Thursday.
The cases were identified after abnormal crane mortality in the area, and laboratory sample tests detected the deadly H5N1 strain, the ministry said inastatement.
Following the detection, the Ministry of Health conducted an epidemiological investigation and gave treatment to people who were close to the infected birds.
At this time of year, hundreds of thousands of birds pass through Israel on their way to Africa, increasing the risk of infection, the statement noted.
The agriculture ministry called on farmers to keep separation between farms and wild birds to prevent infection.
Cases of bird flu have recently been discovered in chicken coops in northern and southern Israel.
The first and largest outbreak of bird flu in Israel was recorded in 2006, involving nine industrial turkey coops in the south.
H5N1 bird flu can also infect other animals, such as pigs, cats and tigers, and in rare cases humans as well. Enditem
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အာဆီယံ ပထမဆုံး 5G smart ဆေးရုံ တည်ဆောက်မှုအား တရုတ်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းက ကူညီပေး